Fandehanana vola ~ Journey-Assist - 5 fomba hahazoana vola
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Mahazo dia mandehandeha izahay
Mahazo dia mandehandeha izahay
Ahoana ny fomba hahazoana vola mandritra ny dia
serivisy mahafinaritra Grabr.io, izay manambatra mpandeha sy mpividy izay liana amin'ny souvenir avy amin'ireo firenena izay vangianao ireo.
Samy liana ny fiaraha-miasa toy izany ny roa tonta. Ity serivisy ity dia tena malaza ary azo inoana fa mahita zavatra mahaliana anao.
Ho an'ireo bilaogera fitsangatsanganana, misy koa ireo karazana “mpiara-miasa rehetra” avy amin'ny antokonolona hitady tapakila fiaramanidina, hotely, fanofa fiara ary safidy hafa ilain'ny mpizahatany.
Azo inoana fa mitady vola tsy an-dia, fa amin'ny dia iray. Fantatra fa ny trano manofa trano na trano tsy miankina amin'ny tompona vola no tena mahasoa kokoa noho ny fametrahana hotely mitovitovy. Misaotra ny serivisy toy Airbnb.ru na Booking.com na ny toy izany, ny fanofa ny tranonao mandritra ny faharetan'ny dia dia asa azo tanterahina.
Ao amin'ny tabilao amin'ity pejy ity, hijery ireo rindranasa maromaro ho an'ny fanaraha-maso sy fitsangatsanganana sary isika.